Date: September 26, 2014Author: Oromedia 0 Comments
Yeroon isaa yeroo Irreechaa ti. Ayyaana kana yeroo kabajnu hundumaa dhugaa dagachuu hin qabne jabaa tokkotu jira. Irreecha ayyaana lammii Oromoo maraa taasisuu irratti hanga ammaatti hojii hangamtu hojjetame, hangamtu hoo nu hafe kan jedhu wal gaafachuu feesisa.
File: Irreechaa Melbourne 2011
Akka hubannaa abbaa barruu kanaatti, Irreecha ayyaana lammiilee Oromoo maraa taasisuu irratti hojii danuutu nu hafa. Hayyuulee seenaa fi aadaa Oromoo, akkasuma beektota baranee (scholars) irraa qoodni hanga ammaa gumaachame xiqqaa miti tahuyyuu, quufsaa dha jechuuf nama rakkisa. Irreechaaf ilaalchi Oromoon qabu gabbataa deemee har’a ayyaana miliyoonota hirmaachisu kan tahuu danda’e hojiin gadi fagoon irratti hojjetameef miti. Dheebuu Oromummaa ilmaan Oromoo qabantu ayyaana kana dagaagsee sadarkaa kanaan gahe. Jibba Habashoonni nuuf qaban irraa ka’uun xiiqeffannee eenyummaa keenyaan boonuutu ayyaana kana guddisee irree jabaa kana itti hore. Oromoon amantii fedheyyuu haa hordofuutii Irreechi irree kiyya jedhee ayyaana kana akka mallattoo eenyummaa saba isaatti ilaaluutu jabina kana fakkaatu nutti hore.
Previous Previous post: Seenaa Gabaabaa Aadde Faaxumaa Galmoo (Haadha Abdii) 1930-2014
Next Next post: Irreechaa: Ayyaana Araaraa fi Nagaa